zihlangene uhlobo filter - China Tianjin Chunyuan Longrun
pipe drip irrigation
PE umbhobho soft
inkqubo yokunkcenkceshela drip
izixhobo umbhobho ye tape drip irrigation
izixhobo umbhobho for umbhobho pe
kuhlanganisiwe uhlobo lokucoca ulwelo
Isichumiso kunye nenkqubo filter nesichumiso kunye nenkqubo yokuhluza ngamalungu inkqubo yonkcenkceshelo drip, inkqubo isichumiso kunokunceda ukusindisa iindleko zabasebenzi kuba nako ukusebenza kunye xa yokunkcenkceshela. inkqubo lokucoca kunceda ukwenza amanzi ecacileyo jam musa xa yokunkcenkceshela. Tianjin Chunyuan Longrun Micro-yokunkcenkceshela CO zobuGcisa., LTD waqalisa ukusebenza ngo-1998, yaye yasekwa inkampani ngo-2000, nto leyo nkampani yokuqala benza ukuvelisa inkqubo yonkcenkceshelo drip malunga nokulondolozwa ezolimo amanzi. Afte ...
Min.Order Ubungakanani: 10000m
Supply Amandla: 24,000,000m
Nesichumiso nenkqubo yokuhluza
Nesichumiso kunye nenkqubo yokuhluza ngamalungu inkqubo yonkcenkceshelo drip, inkqubo isichumiso kunokunceda ukusindisa iindleko zabasebenzi kuba nako ukusebenza kunye xa yokunkcenkceshela. inkqubo lokucoca kunceda ukwenza amanzi ecacileyo jam musa xa yokunkcenkceshela.
Tianjin Chunyuan Longrun Micro-yokunkcenkceshela CO zobuGcisa., LTD waqalisa ukusebenza ngo-1998, wawumisa
inkampani ngo-2000, nto leyo nkampani yokuqala benza ukuvelisa inkqubo yonkcenkceshelo drip ngenxa
ukonga ezolimo kwamanzi. Emva uphuhliso kweminyaka about20, siye inkqubo emithathu ngoku, inkqubo yonkcenkceshelo drip, ukutshiza inkqubo yonkcenkceshelo kunye egadini zokunkcenkceshela system.The iimveliso eziphambili kuquka umbhobho drip, PE nelembande, PE umbhobho, inkqubo filter, itanki isichumiso, ipipi izixhobo. Bonke babe bapase i-ISO kweziqinisekiso 9001.
Phambi kokuba uthenge imveliso kufuneka uyazi le mibuzo ilandelayo, siya kuyila inkqubo yokunkcenkceshela drip njengako kulwazi lwakho.
1. Ubude nobubanzi welizwe?
2. Yintoni isityalo ntoni na ukhula?
3. Umgama lo mqolo?
4. umthombo wamanzi, iqula okanye emlanjeni okanye kwabanye?
1.Why usebenzise inkqubo yonkcenkceshelo idriphu?
Impendulo: inkqubo yonkcenkceshelo Drip yinkqubo leyo enokukwenza ube zokonga amanzi / umsebenzi / isichumiso.
2.What uhlobo iimveliso ukuba i ukhethe ukuba ilizwe lam?
Impendulo: It siwa kangakanani ilizwe lakho kwaye yintoni ufuna ukucwangcisa, ukuba awazi kakuhle kunjalo,
nje ucele kum kungekho mathidala, ndiza kukunika icebiso ngokwendlela kulwazi lwakho.
3.Does le nkqubo kuxabisa malini?
Impendulo: Into ixhomekeke uyilo, siya kuzama konke okusemandleni ethu ukuze ube uyilo endiwazuze ngaphantsi kodwa kakuhle.
4. Nawuphi iziqinisekiso?
Impendulo: Umgangatho: GB / T 17187-2009. ISO9001
5.How ngenkonzo yakho emva-ukuthengiswa?
20years amava kuphelisa worriers bakho bobabini umgangatho kunye nofakelo.
Previous: isihluzi centrifugal
Okulandelayo: disc lokucoca ulwelo
Agricultural Drip Irrigation lokucoca ulwelo
Inkanyamba lokucoca Water
Drip Irrigation lokucoca
icebo lokucoca ulwelo Kuba itshimini Factory
Amacebo okucoca For Systems Water
Irrigation Micro lokucoca ulwelo
Irrigation lokucoca Water System
Mesh Icebo lokucoca ulwelo
Sand Isihluzi ngokuba Drip Irrigation
Self Ukucoca icebo lokucoca
Amanzi Isihluzi Lokulinganisa
icebo lokucoca isilinganisi samanzi Male Elbow
Amanzi Isihluzi zangaphandle
filter centrifugal kunye umnatha
metal 100L itanki isichumiso
tank nomanyolo 2
63mm umnatha lokucoca ulwelo
Company: Tianjin chunyuan longrun micro irrigation Technical Co., Ltd